Talo bixin ku wajahan khamaarka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cayn kamida khamaarka Foto: Jessica Gow / SCANPIX
Talo bixin ku wajahan khamaarka
La daabacay tisdag 17 januari 2012 kl 12.05
Machadka dawligaa Statens Folkhälsoinstitut, ayaa sheegay in dad gaara haya 260 000 qabaan dhibaato khamaar ciyaaris iyo isku biimeen baqtiyo nasiibka , arinkaas ayaa hor seeday in la furo layn caawiya dadkaas iyo qarabadooda. Ku waas oo la siin doono talo bixin ku wajahan cawaaqib xumada khamaar oo loo soo marina hayo telefonka,chatt-ka E-mail-ka iyo sms-ka oo dhamaantood lagu heli karo 15 luuqad.
Laynka caawinta ayaa ah bilaash isla markaana lagu heli karaa warbixino badan oo ku saabsan dhibaatooyinka khamaarka oo sida ay sheegtay Marie Risbeckoo ka tirsan madaxda, Statens folkhälsoinstitu laynkani uu noqona hayo kii ugu horeeyey ee dalkan Iswiidhan laga hir galiyo.
Dhalin yarada yaa ka mida dadka ku soo hoobana haya tobankii sano ee ugu danbeeyay ciyaarida khamaarka, kuwaas oo inta badan ka ciyaara dhanka internadka, taas waxaa xaqiijiyey Statens Folkhälsoinstitut oo ah macadka ka danbeeyay laynkaan.
Warkan waxaan ka soo xiganay: Statens Folkhälsoinstitut